Ebe Pita na Paul wusiri ike, St. Petersburg
Ọ dịtụla mgbe ị gara pearl nke St. Petersburg , ebe Pita na Paul wusiri ike? Ọ bụrụ na ọ bụghị, jide n'aka na ị ga-eleta ememe ncheta a, nke e wuru n'elu Hare Island. Ọ bụ ebe a ka obi nke akụkọ ihe mere eme nke isi obodo ahụ dị, ọ bụghị ileta ebe ndị a - ajọ mpụ! Akụkọ ihe mere eme nke Peter na Paul wusiri ike bụ ọgaranya ma na-adọrọ mmasị, ụlọ ụlọ ahụ dịkwa nnọọ ebube! Anyị na-akpọ onye na-agụ akwụkwọ ka ọ gaa na njem nlegharị anya, nke ga-enye aka n'ozuzu iji ghọta ihe ị ga-atụ anya ịga leta akụkọ ihe mere eme a.
Ewubere ebe nchekwa a malitere na May 1703, nke Peter P. malitere. Ọ bụ echiche ya na otu mgbagwoju anya nke isii dị n'otu bụ otu ihe nchebe. Ụfọdụ omenala ndị metụtara ebe a ka dị ndụ taa. Karịsịa, ọ bụ volley cannon, nke a na-anụ site na bastion nke Naryshkin kpọmkwem n'oge ehihie. Ebube mbu mere n'afọ 1730, n'oge ahụ, ọ bụ mmalite nke ụbọchị ọrụ maka ụfọdụ, na njedebe ya maka ndị ọzọ.
Taa, Pita na Paul wusiri ike bụ akụkụ nke ụlọ ihe ngosi ihe mere eme nke St. Petersburg . N'akụkụ ya, ebe nchekwa nke onye na-ebute ụzọ, Peter the Great, na-anwụ anwụ na 1991 site na ihe ncheta nke bụ ihe e ji aka nke onye na-ese ihe nkà bụ Shemyakin. Ebe ọ bụ na n'oge na-adịbeghị anya, n'akụkụ osimiri nke mgbagwoju a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla enwere ntụrụndụ. Sitekwa n'ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịga njem nlegharị anya nke ụlọ ncheta Pita na Pọl, na, kwere m, ọtụtụ n'ime ha! N'agbanyeghi na enwere ike ime ulo nile, enweghi ike ihu ndi mmadu ozo ebe obula n'agbanyeghi nyocha nke oma.
Mgbe ị nọ n'ókèala nke mgbagwoju anya, jide n'aka ịga leta katidral nke Pita na Paul wusiri ike. A na-ewu ụlọ ncheta ihe owuwu a na ụdị ihe owuwu dị iche iche nke Russia, nke na-egosipụta onwe ya na mpụga nke ụlọ na n'ime mma mma ya. Na abata n'ime, ozugbo a na-achọta ezigbo iconostasis, jiri nkà mara mma ma jiri ya chọọ mma. Ebe a dịkwa ịrịba ama n'ihi na ọ bụ ebe a ka ili nke ezinụlọ eze Romanovs dị. N'ime mgbidi ndị a ruo n'oge a bụ ihe fọdụrụ nke ndị ọchịchị mbụ nke alaeze ahụ, site n'aka Peter Onye Ukwu ruo eze ikpeazụ, Nicholas nke Abụọ.
Ọtụtụ mgbe na mgbidi nke ụlọ oge ochie nke ụlọ Pita na Pọl, e gosipụtara ihe ngosi dịgasị iche iche, a na-egosipụtakwara oge dịgasị iche iche nke àgwà dịgasị iche iche n'ihu ọha. Ọ ga-adọrọ mmasị ọ bụghị nanị maka ndị na-achọpụta oge ochie, n'ihi na n'ókèala nke ebe a na-ewusi elu, ọ ga-ekwe omume ileta ụlọ ngosi ihe ngosi nke ọzọ maka maka ịzụlite nkà na ụzụ na ndị na-eke eluigwe. Ọ bara uru ileta ọnụ ụzọ ámá nke Peter na Pọl Paul wusiri ike, ụlọ nke bụ ụlọ kasị ochie nke isi obodo. N'otu oge, ọnụ ụzọ ámá ndị a dị mkpa, n'ihi na site na ha ọ ga-ekwe omume ịbanye n'ime mgbidi ahụ. Ọnụ ụzọ ámá na-enye echiche dị mma nke ebe gbara ya gburugburu.
Na nke a nyochaa mkpirikpi anyị na-abịa ná njedebe, ọ na-anọgide na-enye ndụmọdụ na otu kachasị mma iji banye n'ụlọ nchebe Pita na Paul. Nọmba nkwụsị 36, ihe nkedo nke 393, 205, 223, 136, 177, 30, 63, 46 na nọmba tram 3 ga-aga ebe a. A na-akpọ ọdụ ụgbọ oloko "Petrogradskaya". Anyị nwere olileanya na isiokwu a ga-abara onye na-agụ ihe uru, na nleta ndị na-abịanụ na ihe ngosi nka na njem nleta na-adọrọ mmasị. A na-enye gị ihe ncheta nke ọma na mmetụta dị mma!
Kedu otu ị ga-esi họrọ ụlọ nkwari akụ iji zuo ike na nwatakịrị?
Akụkụ osimiri nke Kabardinka
Beaches nke Sudak
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Paris
Visa na Vietnam
Ịgba ọsọ na Vietnam
Kedu ụdị ihe ịchọ mma iji si na Thailand?
Ihe iji mee Goa?
Mkpụrụ osisi na-aṅụ mmanya
Esi esi esi nri.
Monoblock na ihuenyo mmetụ
Nri iri nri n'ime ime ụlọ
Na - ewe iwe - ihe ị ga - eme?
Gnoyatsya anya na nwa amụrụ ọhụrụ
Kedu egwu iji gee ndi di ime?
Dorotheanthus - na-eto site na mkpụrụ
Pores ọma na ihu
Nwunye nwunye nke Charlie Sheen nọ n'ụlọ ọgwụ iji chọpụta ọnọdụ uche ya
A na-enwu ntutu mgbe ị na-emegharị
27 ihe kpatara na ị gaghị aga New Zealand
Kristen Stewart ga-ewepu obere ihe nkiri banyere ike nwanyi dị n'ime
Metronidazole na gynecology
Enwere ike inwe mmekọahụ na ụlọ ịsa ahụ
Bọnye na-ebugharị akwụkwọ